Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku soo qaadanayno shan sano ka hor markii ay Real Madrid ka qaaday Barcelona Copa del Rey – Gool FM
Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku soo qaadanayno shan sano ka hor markii ay Real Madrid ka qaaday Barcelona Copa del Rey
Haaruun April 16, 2019
(Madrid) 16 Abriil 2019. Aqristayaasheenna sharafta leh ku soo dhowaada xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaana maanta ku soo qaadanaynaa final-kii Copa Del Rey ee ay kooxda Real Madrid ka qaaday shan sano ka hor naadiga Barcelona.
Maanta oo kale sanadkii 2014-kii, waxaa la ciyaaray final-kii 112-aad ee Copa del Rey, waxaana kulanka El Clásico ee dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona guul gaartay oo koobka qaaday naadiga Los Blancos lagu naanayso.
Kulankan waxa uu dhacay maanta oo kale 16-ka bishii April sanadkii 2014-kii, waxaana uu ka dhacay garoonka Mestalla ee Magaalada Valencia, waxaana ay ahayd markii todobaad oo uu garoonkan marti geliyo final-ka Copa del Rey.
Kooxda Real Madrid ayaa kulankan final-ka ahaa markeedii 19-aad ku guulestay Copa del Rey kaddib markii ay 2-1 kaga adkaatay naadiga ay xafiiltamaan ee Barcelona.
Goolka furitaanka ciyaartan waxaa dhaliyey 11’daqiiqo Di María oo markaa ka tirsanaa Real Madrid, laakiin Bartra ayaa goolka barbaraha u keentay kooxda Barcelona 68’daqiiqo.
Gareth Bale ayaa dhaliyey goolka guusha oo ahaa mid caaqibo leh 85’daqiiqo dhammaadkii ciyaarta, kaddib markii uu kubadda inta ku hor tuurtay Bartra oo soo maray bannaanka garoonka ka soo xarooday garabka, sidaasna kubadda inta la galay xerada ganaaxa shabaqa Barcelona gaarsiiyey, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay ku adkaatay Real Madrid.
Shan sanadood ayaana laga joogaan maanta sheekadan ee final-kaas Copa Del Rey oo ay kooxda Real Madrid ka qaaday naadiga Barcelona.
"Iyaga iyo Innaguba waan u qalannaa ku guuleysiga Premier League.".
Garsoorka kubadda cagta Soomaaliya oo bilaabay isticmaalka Aaladda GPS-ka..+ Sawirro